ကောက်လှိုင်း, Cast ကိုသံမဏိကြှမျးထုတ်ကုန်စက်သီးကဒီမှာဖုံးလွှမ်းအဆိုပါထုတ်ကုန်ဒါးတပ်ဆင်သောတစ်ဦးပြီးဆွဲ device ကိုဖြစ်ပြီး, ကွန်တိန်နာမြှင့်တင်ရန်သတ္တုတွင်းတငျမွှောကျ, အလိပ်ကြားကတငျမွှောကျထောကျပံ့ဆွဲကိုထောကျပံ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်အတွက် လုပ်. , ၏အသုံးပြုမှုကိုလမ်းညွှန် ဝါယာကြိုးကြိုးစတီယာရင်။ ကြိုး groove ဝါယာကြိုးကြိုး၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုတိုးပွါးစေသောပလပ်စတစ်နံရံသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှငျ့အတူရှိ၏။ ပစ္စည်းဒီပစ္စည်းဟာသတ္တုများပုံသွန်းသံမဏိ G42CrMo4 ISO14737 ဖြစ်ပါသည်: 2003 (E) နဲ့တစ်ဦးအပြည့်အဝဦးသေဆုံး st ဖြစ်သော ...
Cast ကိုသံမဏိအတွင်းကောက်လှိုင်း, စက်သီး
ဤနေရာတွင်ဖုံးလွှမ်းထုတ်ကုန်ဒါးတပ်ဆင်သောတစ်ဦးပြီးဆွဲ device ကိုဖြစ်ပြီး, ကွန်တိန်နာမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဝါယာကြိုးကြိုးစတီယာရင်၏အသုံးပြုမှုကိုလမ်းပြသတ္တုတွင်းတငျမွှောကျ, အလိပ်ကြားကတငျမွှောကျထောကျပံ့ဆွဲထောက်ခံပါတယ်။ ကြိုး groove ဝါယာကြိုးကြိုး၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုတိုးပွါးစေသောပလပ်စတစ်နံရံသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှငျ့အတူရှိ၏။
တစ်ဦးအပြည့်အဝဦးသေဆုံးသံမဏိဖြစ်သည့် 2003 (E) နဲ့, လေဟာနယ်-degassed နှင့်ခိုင်မာခြင်းနှင့် elongated အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်လာသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူဒဏ်ငွေစပါးကိုအရွယ်အစားဖွဲ့စည်းပုံမှာမှလုပ်ငန်းများ၌: ဒီပစ္စည်းဟာသတ္တုများပုံသွန်းသံမဏိ G42CrMo4 ISO14737 ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု : (%)
နေ့စဉ်ကောက်လှိုင်းပေါ်ရရှိနိုင်ပါက Cylinder ပုံစံသွန်း-on ကိုစမ်းသပ်လုပ်ကွက် (∅က x 250 မီလီမီတာ 60 မီလီမီတာ) မှအရည်အသွေးအပူကုသမှုပြီးစီးပြီးနောက်ပေးပို့ခွအေနအေဆိုလိုသည်မှာအတွက်အခန်းအပူချိန်မှာ Checked: နမူနာပြင်ဆင်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံး ASTM တစ်ဦးက 370-96 နှင့်အတူလိုက်လျော ။
ဖြန့်ဝေခွအေနအေ: hardening နှင့် tempering ။
အားလုံးစစ်ဆင်ရေးသယ်ဆောင်ထွက်နေသော In-အိမ်သူအိမ်သား foundry စက်ရုံမှာ။
ဂျာမန်စံ Din မာခ်အတွက်လိုအပ်သည့်အတိုင်း Cast တစ်ဆရာသမားလုပျ-နညျးတူထုတ်လုပ်နေကြ
1599-1: သြဂုတ်လ 1997, Cast ၏ပေးပို့အခြေအနေများအာဏာရ။ အဆိုပါတန်ဆာတစ်ဦးချင်းစီစေးဘွန်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးသဲပြင်ဆင်မှုကို အသုံးပြု. တစ် modular ဘူးအတွင်းထွက်ယူသွားတတ်၏။
အဆိုပါအရည်ပျော်အောက်ဆီဂျင်သံမဏိစက်ရုံ (2 180 ချွတ် t ကို BOF converters) တွင်ထွက်ယူသွားတတ်၏, အဆိုပါ ladle စွမ်းရည်အပြီးအပိုင်ထိန်းချုပ်ထားသည်အမြန်နှုန်းအရာတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်အောက်ခြေလောင်းဖြစ်စဉ်ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါသတ္တုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ် spectrograph အသုံးပြု. ဓြှု။
တိုင်းကောက်လှိုင်းစုထဲမှာတစ်ဦးစုစုပေါင်းအရည်အသွေးကိုအပူကုသမှု (ခိုင်မာစေခြင်းနှင့်ဒေါသ) သက်သာရာစပါးကိုသန့်စင်ရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှနှစ်ဦးစလုံးရည်မှန်းခြင်းကိုသည်းခံ။
တစ်ဦးချင်းစီကောက်လှိုင်းစုထဲမှာရန်သူအတွင်း NDT ထိန်းချုပ်မှုချွတ်ယွင်း, ငါတို့ကြမ်းတမ်းစက်အခမဲ့အတွင်းအရည်အသွေးပြည့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်။
UT: ASTM A609 အဆင့်Ⅱအဆိုပါ groove နှင့်သူဌေးစင်တာသည်။
MT: 100% ASTM A125 အဆင့်Ⅰ
အဆိုပါ Cast သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် antirust ရေနံ FPC-600 အားဖြင့် coated နေကြသည်။
2000: ထည်လမ်းကြောင်းအကောင်အထည်ဖော်အရည်အသွေးစနစ်က ISO 9001 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။
အဆိုပါစံစာရွက်စာတမ်းများတိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုခြေလှမ်းများ၏အပြည့်အဝ traceability သေချာ:
ထုတ်လုပ်သူစမ်းသပ်မှုလက်မှတ်များ Din မာခ်မှဓာတုဖွဲ့စည်းမှု, စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် Non-အဖျက်စာမေးပွဲအပါအဝင် 10,204 § 3.1 နှင့်အညီ,
တစ်ဦး "အဖြစ်-built" ဝိုငျးဝနျးနှင့်အတူထောက်ခံရှုထောင်စစ်ဆေးမှုများ;
ကျနော်တို့ကအမြဲသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသက်တာ၏ optimization ပစ်မှတ်ထား, ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဆအတွေ့အကြုံ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအတွက်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရွေးချယ်မှုများအဆိုတင်သွင်းဖို့ကွိုးစားကွ။
နောက်ထပ်ဖြန့်ဝေအစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အသုံးဝင်သောထုတ်ကုန်အပေါ်အကြံပေး, ဒီဇိုင်း, ပစ္စည်းများနှင့်လျှောက်လွှာအတွက် foundry ဌာနများ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးနေကြသည်: ကညာဘက်ကိုဖြေရှင်းချက်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့သငျသညျအတွက်ကူညီရာတွင်တက်ကြွစွာသငျသညျကိုထောကျပံ့မညျဖွစျသညျ။
အမ်မလီလျူ ဖုန်းနံပါတ်: +86 13918839495 ဖက်စ်: +86 21 33847960 Sales2@special-metal.com
ယခင်: ဘောလုံးကိုစက် Hollow Shaft